globalpressonline » Taariihkda Dekeda Berbera. Qalinkii :A/rahman fidhinle
Taariihkda Dekeda Berbera. Qalinkii :A/rahman fidhinle
Sep 7, 2016 - Comments off
Waxaa Dekeda Berbera qaybteeda hore oo 300 mitir ah inoo dhisay Dawladii Federaalka aheyd ee Ruushka 1964 – 1968 , qaybtaasi dadeedu waxay noqonayaa maanta 52 jir.Waxaa Qaybta labaad oo 350 mitir ah iyana inoo dhisay Dawlada Mareykanka sanadkii 1982, Qaybtan labaad dadeedu waxay iyana noqonaysaa ilaa 34 jir. Taa soo dhererka Dekeda Berbera ka dhigaysa 650 mitir . labada wadan ee hore umaalgeliyey Dekeda berbera waxay biyaha badda Dekeda hoos uqodeen ilaa iyo 11m, halka cabirka moolka hoose ee Dekedaha casriga ah ee Aduunku yihiin ilaa 15 m.
Taasi waxay ku tusaysaa in Dekeda Berberi tahay Deked aan casri aheyn oo aan dayac tir buuran laga qaban mudo dheer oo 26 sanadood ah in kasta oo barxad balaadhan oo containarada la dhigo lagu kordhinaayey mudooyinkii danbe.
Maadaama aanay dekeda Berberi laheyn Wiishash casri ah ( Mobile Cranes ) oo rara ama dejiya xamuulka culus waxay had iyo jeer ku xidhan tahay hawl maalmeedkeedu Wiishashka Maraakiibta ku soo xidha ku rakiban kuwaas oo iyagu containarada iska dejiya isana saara. Dekeda Berberi waxa qalab hagaagsan loo tiriyaa oo ay leedahay Wiish raseeye ah (Reach stackers ) oo keliya.
Khabiir Jarmal ah oo dhawaan loo diray in uu soo qiimeeyo maalgelinta ay u baahan tahay casriyeynta Dekeda Berberi ayaa ku qiimeeyey in ugu yaraan Dekeda Berbera u baahan tahay $25 Million oo dollar. In kasta oo laga gaabiyey in Dekeda Berbera looga raadiyo Maalgelin rasmi ah wadamada Eurpean Union ka oo u godladay JSL mudooyinkii danbe, Waxaa xabad Taag ah oo ah kuwa maraakiibta soo xidha siina gelbiya inoogu yaboohay in uu kharajkeeda bixiyo Bangiga Aduunka (World Bank) Taa-gaas oo aan weli soo gaadhin Dekeda Berbera.
Badeecada ka soo degta Dekeda Berbera waxaa lagu qiyaasaa 1 million oo Tan, culeyskaas oo u badan ugu yaraan 30,000 oo Container oo ka dega sanadkiiba, Wax yaabaha ka dhoofa Dekeda Berbera waxaa ugu badan 3.5 million adhi ah sanad kiiba . dhakhliga sanadlaha ah ee Dekedu dalka Somaliland u soo xareyso sanadkiiba ayaa lagu qiyaasaa $1.5 ilaa $1.8 Million doolar. Taas oo $2 Million oo keliya lagu daro Miisaaniyada Dawlada inta kalena lala huluusho muska iyo miscirirta Xayndaabka Madaxtooyada. Sidaynu lawada socono waxaa Dekedaha Camira sadex nooc oo badeecadaha kala duwan ah sida (a) Badeecada wadanka gasha. (b) Badeecadaha Transitka ah. (c) Badeecadaha Dalka dhaafta sida ta Ethiopia galasha . Sidaa daraadeed Maalgelintaa DPW ay Xukuumadu la gelayso waa in uu ahaadaa mid xaliiban oo xalaal ah oo caadka iyo ciirada qarsoon ee saran ay uga qaadaa Xukuumadu mujtamaca Somaliland. Maalgelinta DPW ay Somaliland lagelaysaa waa in uu ahaa mid ku saleysan Bino Deked cusub oo Container Terminal ah.
1- Maadaama Dekeda Berberi dalka soo geliso sanadkiiba $1.8 million markaad ku dhufato X 30 sanadood = $54 Million, Sidaa daraadeed waa in faa’idada intaa ka badan ee dalku ka helaayo Maalgelinta DPW ay Xukuumadu ummadda JSL u soo bandhigtaa una cadeysaa. laakiin Boowe sheekada odhanaysa waxaynu DPW ka qaadanaynaa $15 Million oo dollar oo xaqal qalin ah, $5 Million oo kiro ah, 10% sales handing ah, 35% oo marka profit la helo ah laga qaadi doono iyo Dekedii Qaranka oo 30-40 sanadood DPW lagu wareejiyo wax Mujtamaca reer Somaliland u cuntamaaya oo ay liqi karaan maaha.
2- Sidaa daraadeed waa in Heshiiska Maalgelintu ku saleysnaadaa in shirkada DPW maalgelinayaan oo dhisaan Container Terminal cusub oo dhererkiisu gaadhaayo 400 m + 400 m = 800m. looma baahna in Shirkada DPW isku dhex wado dayactir Dekedii hore ah, dhisme Deked cusub ah iyo mashaariic horemarineed oo is huwan si ay Somaliland u rahmadaan mudo dheer oo 30 sanadood iyo ka badan ah.
3- Waa in Xukuumadu Shacabka Somaliland u cadeysaa Saameynta Taban ee Maalgelinta DPW ay ku yeelanayso Maamulka iyo Maareynta Dekeda Berbera sida:
Adeega Maraakiibta, Adeega Handhaling ka iyo Adeega Marine Services.
4- Sida lawada ogyahay Shaqaalaha Dekeda Berbera waa 4800 oo qof taas oo 850 qof oo keliya ay shaqaale joogto ah yihiin inta kale ay yihiin shaqaale aan joogto aheyn, waxaa jira iyana 200 oo muwaadin oo iyana guno joogto ah ka qaata Dekeda.
Sidaa daraadeed waxaa xukuumada laga doonayaa in ay dhayda ka cadeyso sife yaasha kala duwan ee Maalgelinta DPW ay u saameynayo shaqaalaha kala duwan ee Dekeda Berbera.
5- Hadii Mulkiyada iyo dhamaan Dekeda Xuquuqdeeda si indho l’aan ah loogu wareejiyo DPW yaa damaanad qaadaya xuquuqdii shaqaalaha Dekeda iyo intii ku sii hoos nooleyd.xoogsatadaa muruq maalka ubadan.